Olan’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra Vonona hifampiresaka ny minisitra Maharante
Misy voavidy vola ireo mpiasa manatanteraka fitokonana eo anivon’ny paositra Malagasy ankehitriny raha araka ny feo mandeha.
Na dia efa governemanta iraisana aza mantsy no natsangan’ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia mbola misy ihany ireo tsy mankasitraka. Raha ny fantatra dia efa nanolotra ny fandaharan’asa mandritra ny enim-bolana entina hanatsarana ny sehatry ny fifandraisan-davitra ny minisitra Maharante Jean de Dieu ary tsy mbola nanala tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny minisitera iadidiany hatreto. Anisan’ny voafaritra ao anatin’io fandaharan’asany io, ohatra, ny fametrahana ivontoerana nomerika eny anivon’ireo sekoly filamatra, toraka izany koa ny eny anivon’ireo oniversite dimy eto amintsika miampy ireo bus mandehandeha miisa 100 entina hanampiana ireo tanora manerana ny Nosy tsy afaka misitraka ny internet. Vonona ny hifampiresaka sy hisokatra amin’ny rehetra ny minisitry ny paositra Maharante Jean de Dieu mba hampisindana ny ahiahy tsy hihavanana ka anisan’ireny ireo mpanao fitokonana.